malgachitudes » lay andriamialy
dans : Actus, malgachitudes
Mba fampahafantarana fotsiny ihany no ilazako fa tsy misy vola 1 000 000 de dollar amerikanina manan-kery izany.
Sao dia hoe lasa feon-kira famantarana fotsiny ny fahalalantsika an’itony hira itony ka tsy haintsika intsony ny vontoatin’ny tonony. Ny fitondràna mantsy miovaova fa ny tolona atrehin’ny vahoaka andavanandro dia misy foana.
Mandray anjara amin’ny #BAD2015 indray ny tenanay amin’ity taona ity. Hetsika isan-taona ataon’ny mpanao blaogy manerantany izy io hanoratana mikasika lohahevitra iray. Amin’ity 2015 ny lohahevitra noraisina dia ny hoe #raiseyourvoice izany hoe « asandrato ny feonao ». Dia satria sy nahoana moa, raha ny hevitr’i Lay Andriamialy no tokony hanandram-peo? Pour lire l’article en français, cliquer ici
dans : Actus, humour, malgachitudes, theories
dans : Actus, Expressions, humour, jeux gasy, Malgachisation, malgachitudes
Amin’izao BAD2014 (#BAD2014, Blog Action Day) izao izay miompana amin’ny « inequality » dia tiako ny hitanisa ireo tsy rariny rehetra misy eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Ici pour voir mon article en Français pour le BAD2014
Nalaza tato ho ato ny valala. Valala aman-tapitrisany no nandrakotra an’Antananarivo. Tsy azo lavina ny maharatsy izany toe-javatra izany. Ny valala mantsy rehefa maro loatra toy izany dia manjary biby mpanimba. Manimba ny voly, ny zava maitso izay ataony maty faisana ao anatin’ny fotoana fohy. Ao ny mifanome tsiny, ao ny mivavaka mafy, misy koa ireo adala mifalifaly nefa ny …
dans : Actus, Contes d'Odag, malgachitudes
Version française ici. English version here. Indro i Dago mitsirara manamorona ny Lakandrano sady mandinika ny rano mihamena,menan’ny rany. Koa satria tsy maintsy azavaina hatramin’ny voalohany ny resaka atao dia andao ilaozana aloha ity sehatra ity ary andeha hiverina any amin’ny fiandohan’ny tantara. Ato ny tohiny …
Mpanohitra : Tsisy raisina ny TIM?
Ato anatin’ny repoblika fahaefatra dia manana toerana manokana ny mpanohitra. Ny filohan’ny mpanohitra dia sady hanana ny kabinetrany no hanana ny satan’ny diplomaty. Ny hevitra voizina moa dia ny hanome azy avy hatrany ny toeran’ny filoha lefitry ny Antenimiera. Nahoana moa no tsy ho ny filohan’ny TIM no hahazo io toerana io?